Baahida hore ee iPhone 11 ayaa ka fiicnaatay sidii la filaayay | Wararka IPhone
Apple waxay ka yaabisay dadka maxalliga ah iyo shisheeyahaba sanadkii hore markii la bilaabay iPhone XR, oo ah terminal aad u jaban, haddii aan ku iibsannay XS iyo XS Max. IPhone XR ma uusan laheyn waxyaabo badan oo ka mid ah astaamaha qoyska XS, in kastoo taasi aysan caqabad ku ahayn. ayaa ahaa iPhone-ka ugu iibinta badan sanadkii la soo dhaafay.
Soo bandhigida iPhone 11, Apple waxay dooneysay inay siiso qaabkan soo gelitaanka qallooca oo si weyn u wanaajiyay wixii ka horeeyay, iPhone XR, ay na siisay. Ming-Chi Kuo, oo ah mid ka mid ah falanqeeyayaasha ugu caansan dunida tikniyoolajiyadda, ayaa ku sheegay qoraalkiisii ​​ugu dambeeyay ee maalgashadayaasha, in iPhone 11 wuxuu iibin doonaa wax ka badan wixii jiilkii hore.
Soo bandhigida midabada cusub ee Pro kala duwanaanta (saqda dhexe habeenka cagaaran) iyo noocyada iPhone 11 (cagaar iyo mauve), oo ay weheliyaan astaamaha cusub ee ka imanaya qaabka soo gelida, waa in ka badan sababo ku filan isticmaaleyaal badan ayaa qaada tallaabada cusboonaysiinta.
Intaa waxaa dheer, ka barnaamijka iibsiga iibsiga ee dulsaarka-dulsaarka ah, hoos u dhaca qiimaha ee iPhone 11 marka loo eego iPhone XR iyo suurtagalnimada dib u cusbooneysiinta terminaalka sanad kasta, waa sababo kale oo maareeyay, ugu yaraan hadda, si loo dhiirrigeliyo iibka suuqa.
Rajadan sare waxay sababtay falanqeeyayaal kala duwan inay kordhin saadaasha iibkaaga, wuxuu ka socdaa 65-70 milyan ilaa 70-75 milyan inta lagu guda jiro sanadka 2019. Maalmo yar ka hor inta aan si rasmi ah loo soo bandhigin noocyada cusub ee iPhone 11 sanadkaan, Kuo wuxuu sheegay in qaar ka mid ah wararka lagu xaman jiray inay sanadkan yimaadaan iPhone. kala duwanaansho (xukun celin iyo iswaafajin Qalinka Apple) ugu dambeyn ma sameyn doono, wax la xaqiijiyay inta lagu gudajiray dhacdada, oo xaqiijineysa mar kale in waxa Kio dhahayo, loo laabayo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 11 » Baahida hore ee iPhone 11 ayaa wali ka fiican sidii la filayay
Koox saaxiibo ah ayaa tagaya safar ay dib ugu abuurayaan dhammaan waraaqaha Apple